Ihe ole na ole kpatara onye nchoputa Cardano nwere ike isi ezighi ezi banyere DeFi nọ na afụ - CoinWorldMap
Ọtụtụ ihe kpatara Cardano onye guzobere nwere ike mehie na DeFi na afụ
Septemba 19, 2021 Binance, Cardano, Defi, Ethereum, Nft, Solana
N'ime ọnwa kemgbe ọbịbịa nke Decentralized Finance (DeFi), ọtụtụ blockchains, gụnyere Cardano, emezigharịrị iji nweta uru ya.
Agbanyeghị, onye okike Cardano Charles Hoskinson kwenyere na oghere DeFi niile dị na afụ. Gịnịzi? Ọfọn, eziokwu dị iche, dị ka nyocha nke data na-eme ka ọ dị iche iche na-ekpughe ihe dị iche iche.
DeFi ọ nọ na afụ?
Enwere ike ịhụ DeFi dị ka ma ọ bụ ihe ọhụrụ ma ọ bụ nnukwu ihe na-esote, mana ọ bụghị afụ. Ọzọkwa, kemgbe Machị 2020, mpaghara ahụ etoola site na 8589%.
Ethereum abụrụla onye ndu na oghere a ogologo oge, na n'ezie, ọ na-achị 2021% ruo Jenụwarị 97.
Agbanyeghị, ọ jụla kemgbe. N'ezie, nke a bụ 69% n'oge mbipụta n'ofe usoro niile. Kedu otu ọ bụ? Ọfọn, ọbịbịa nke smart nkwekọrịta dakọtara blockchains dị ka Binance Smart Chain na Solana, nwere ike ịbụ azịza ya.
Na mbata nke Cardano, asọmpi na-abawanyewanye. N'ụzọ na-akpali mmasị, mmụba nke ọnụ ọgụgụ ndị sonyere emeela ka mmụba na TVL ETH site na 525% kemgbe mmalite nke afọ.
Ọzọkwa, ọkwa ya na-abịa n'oge DeFi's Total Locked Value (TVL) na-eru nso ijeri $ 200.
Onye guzobere Cardano na-atụnyere DeFi na ICO
N'ime mmemme na nso nso a nke Okwu On The Block pọdkastị, Hoskinson kwuru:
Echere m na DeFi nọ na afụ na ọ na-eme mgbe niile - NFT na DeFi bụ ndị ọhụrụ. Nke a bụ mgbanwe ICO na 2017, ọnọdụ ahụ bụ otu ihe ahụ.
Na mgbakwunye na nke a, o kwuru na ọ bụ ezie na nke a abụghị ihe ọjọọ, ndị mmadụ na-eleba anya na ọ bara uru. Nke a, n'aka nke ya, ebutela ọtụtụ ọrụ ọhụrụ nwere obere mmepe nke ruru ihe karịrị otu ijeri dollar.
Mana isi okwu bụ, DeFi dị nnọọ iche na onyinye ego mbụ (ICO). Ihe dị iche na nke mbụ na nke kachasị mkpa bụ na DeFi nwere ezigbo ojiji. DeFi na-enye ndị na-etinye ego ya ohere ịghọ ndị ọrụ nkeji oge ha na-etinye ego site na ọrụ dịgasị iche iche dị ka ịzụ ahịa, ịgbazinye ego, wdg.
Na mgbakwunye, DeFi dị adị n'echiche na ọ na-enye ndị ahịa uru ozugbo site na ego. N'ụzọ dị iche, eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ICO emebeghị ka ọ bụrụ ihe bara uru.
Na mgbakwunye, akụkọ na-adịbeghị anya sitere na Blockdata chọpụtara na DeFi ka na-eto eto. Achọpụtara na ọ bụrụ na ụlọ ọrụ / ụlọ akụ kpebie itinye ego ma ọ dịkarịa ala 1% nke akụ ha na DeFi, ohere a ga-efu $ 1 trillion. Ọnụọgụ a dị nso n'isi ahịa nke oghere crypto bụ isi.
Banklọ akụ nke Russia kwuru na "na-emegide" ego crypto